The Bridgerton - Xilliga Labaad Xaqiijiyay | Bezzia
Bridgerton-ka: Xilliga Labaad Hada Waa La Xaqiijiyay!
Susana godoy | 27/04/2021 14:00 | Wararka
Bridgerton-ku waxay ka mid ahaayeen guulihii waaweynaa ee xirayay sanadka 2020. Xilli ciyaareedkii ugu horreeyay waxaa la soo saaray xilligii Kirismaska ​​ee sannadka aan kor ku soo sheegnay, weli bilo ka dib dadku wali waxay ka hadlayaan dhagarta iyo jilayaasha ugu waaweyn. Sidaa darteed, ka dib guusha weyn ee sheekadan muddadan, waxaa suurtagal ahayd oo keliya in la sugo qeybta labaad.
Dabcan, waa la filayay sidii aan sifiican uga faallaynay, laakiin waxa laga yaabo inaynaan jeclayn inta badan aqlabiyaddu waa taas Duke of Hastings kuma jiri doono xilli ciyaareedkii labaad ee muddada dheer la sugayay. Haa, waa mid ka mid ah nuuradda iyo mid kale oo ciid ah, sidaa darteed weli ma ogin sida ay waxaas oo dhami u saameyn doonaan guusha qaybta labaad, ee durba rasaasta bilaabatay.
1 Sidee noqon doonaa xilli ciyaareedkii labaad ee taxanaha Netflix
2 Goorma ayuu Bridgerton xilli 2 soo baxayaa
3 Wajiyo cusub oo ku yaal The Bridgerton?
4 Sagootinta Duke
Sidee noqon doonaa xilli ciyaareedkii labaad ee taxanaha Netflix
Anigoon u galin qaswadayaal, waxaan cadeyneynaa in mid ka mid ah burushyada aasaasiga ah ee nagu kalifey inaan ku jeclaano xilli ciyaareedkii ugu horeeyey uu ahaa sheekada jacaylka. Duke iyo Daphne gabi ahaanba jacayl ayaa ku dhacay waxayna hoos u dhigeen caqabado qaar si ay u wada ahaadaan.. Waxay la kulmeen dhibaatooyin dhowr ah, oo ay ka mid ahaayeen carruur. Laakiin dooni mayno inaan horumarino wax kale, dhammaan kuwa aan weli arkin.
Waqtigaan la joogo, kuweenii sidaa sameeyay, waxay ahayd inaan ka kasbano ogaanshaha sida sheekadan quruxda badan u sii socon doonto, laakiin waxay umuuqataa inaysan sidaas noqon doonin. Xilli ciyaareedka cusubi ma noqon doono mid sii socda kii ugu horreeyay, laakiin hadda wuxuu diiradda saari doonaa mid kale oo ka mid ah xubnaha Bridgerton wuxuuna noqon doonaa walaalkii ka weynaa. Sababtoo ah sidaad hubaal u ogtahay, waxay la xidhiidhaan buugaag. Marka, waxaan arki doonaa sida aan ula qabsano si da 'yarta Daphne aysan ugu taahan Duke iyada oo taa bedelkeedana. Waxay umuuqataa in Anthony uu la wareegi doono doorkaas hogaamineed wuxuuna nagu farxi doonaa jacayl cusub iyo sheekooyin cusub ama siro cusub.
Goorma ayuu Bridgerton xilli 2 soo baxayaa
Weli waa xilli hore in laga hadlo goorta Bridgerton xilli 2 soo bixi doono. Tan iyo markii duubisteeda la bilaabay gugan. Waan ognahay sida ay u adag tahay mararka qaarkood in la toogto sheeko heerkan ah, waayo maxaa hubaal ah in illaa dhammaadka sanadkan 2021 ama laga yaabee bilowga 2022, inaynaan heli doonin warka weyn gacmaheena dhexdooda. Haa, si xiiso leh ayaa loo wada sugayaa laakiin tani waxay na siin doontaa waqti aan ku dhuuxno in mid ka mid ah jilayaasha waaweyn uusan sii joogi doonin duubista filimka iyo mustaqbalka la sii dayn doono.
Wajiyo cusub oo ku yaal The Bridgerton?
Waxay lamid tahay nolosha lafteeda, qaarbaa baxa qaarna xoog bay ku yimaadaan. Hagaag, Bridgerton-ka ma noqon doono mid ka duwan. Tan iyo inkasta oo, Regé Jean-Page kuma jiro jilayaasha, waxaa yimid Simon Ashley. Waxay umuuqataa in kani noqon doono jacaylka cusub ee Anthony, taas oo ah, curadka qoyska. Dabcan, waxay umuuqataa in sheekada ay soo laabaneyso iyadoo xambaarsan qiiro iyo jaceyl badan, iyo waliba xoog. Laakiin waa run oo riwaayaddu sidoo kale waxay u soo dhowaanaysaa sidii hore oo kale. Wax ka badan isku darka walxaha qarxa oo naga dhigaya kuwo aad iyo aad u badan oo dulmar yar ah. Waxaa loo maleynayaa in astaamaha intiisa kale, qoyska ugu jecel, ay nala sii socon doonaan hal xilli oo dheeri ah. Laakiin waa run in si buuxda loo hubiyo, weli waa inaan sii sugnaano.
Haa, wax badan ayaan ku adkeyneynaa, laakiin waa inuu isagu runtii ahaa shakhsiyadda ugu weyn iyo maadaama aysan taasi inta badan ku dhicin taxanaha guuleysta, shabakadaha bulshada ayaa u jeestay jilaaga. Sidaa darteed, barta Instagram waxaan ku aragnay sida Duke laftiisa uu u macsalaameeyay guushiisa weyn, illaa iyo hadda. Waxay umuuqataa inuu saxiixay kaliya hal xilli sidaas oo kale, ma sii wadi doono inuu qeyb ka ahaado, laakiin wuxuu had iyo jeer ereyo wanaagsan u hayaa asxaabtiisa iyo shaqada weyn ee siisay isaga aqoonsi caalami ah. Ma jeceshahay inuu noqdo xilli ciyaareedkii labaad?
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Wararka » Bridgerton-ka: Xilliga Labaad Hada Waa La Xaqiijiyay!
Sida Loo Sameeyo Safka Dumbbell si sax ah
5 nooc oo muraayad ah si aad miiskaaga u dhammaystirto